Deg Deg:Haweenay British oo afduub loogu haystey Somalila oo la siidaayey ka dib…. – SBC
Deg Deg:Haweenay British oo afduub loogu haystey Somalila oo la siidaayey ka dib….
Haweenay u dhalatey wadanka Britain oo lagu magacaabo Judith Tebbutt oo mudo 6 bilood ah afduub loogu haystey Soomaaliya ayaa saacado ka hor la siidaayey ka dib markii la siiyey lacag madaxfurasho ah dableydii haysatey.
Haweenaydan oo lagu magacaabo Judith Tebbutt oo 56, sano jir ah ayaa dabley Soomaali ah waxay ka qafaasheen xeebaha wadanka Kenya gaar ahaan deegaanka Kiwayu ee waqooyiga Jasiirada Lamu, waxaana xiligii afduubkaasi uu dhacay la dilay ninkeedii oo lagu magacaabi jirey David kaasi oo 58 sano jir ahaa.
Warka ayaa intaasi ku daraya in haweenaydan saaka diyaarad ka qaaday degmada Cadaado ee gobolka Galguduud halkaasi oo lagu hayey tan iyo markii la soo afduubay horaantii bishii September ee sanadkii hore, waxaana loo duuliyey magaalada Nairobi ee caasimada Kenya iyadoo lagu wareejin doono masuuliyiinta safaarada British-ka ee Nairobi.
Judith Tebbutt, oo la rumaysan yahay inay tahay qof dhagaha si wanaagsan aan wax uga maqlin ayaa saxaafada ugu sheegtey degmada Cadaado markii ay ka duulaysay waxaana ay sheegtey inay ku faraxsan tahay inay dib u hesho xoriyadeeda.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in siideynta haweenaydan ay ka dambeysay ka dib markii la siiyey lacag madaxfurasho ah kooxdii afduubka u haysatey, waxaana marka lagu sameeyo baaritaan dhanka caafimaadka ah ka dib loo duulin doonaa dalka Ingiriiska halkaasi oo ay kula midoobi doono qoyskeeda iyo saaxiibadeed.
Lacagta madaxfurashada ee haweenaydan lagu siidaayey ayaa la sheegay inay tahay mid ay iska uruririyeen qoyskeeda iyo saaxiibaadeed.